I-china abakhiqizi be-RGB Dynamic LED Panel nabaphakeli | Huayuemei
Into Iphaneli ye-RGB Dynamic LED
Ukucaciswa 240 * 240 * 1.6mm
Usayizi we-LED SMD5050
I-LED Qty 64PCS
Ukushisa kombala I-RGB
Amandla 36w / PC
1.Power up branding yakho kanye nokukhangisa
Ezweni lanamuhla eliguquguqukayo, ukufaka uphawu lwakho lomkhiqizo nokukhangisa kudinga ukugqama ngobuciko nezinto eziyisimanga. Kubalulekile ukusebenzisa isabelomali sakho ngokuhlakanipha ngaphandle kokuyekethisa emcabangweni nasekuqaleni. Amathuba anikezwa ngamaphaneli we-HYM Dynamic LED awanamkhawulo. Ngokumane ushintshe okuqukethwe futhi ugqamise izingxenye zokuphrinta kwakho, wakha ukubukeka okuhluke ngokuphelele nokuzizwa ngomfanekiso ofanayo ngqo.
Ngenxa yebhokisi lokukhanya elinamandla, umkhiqizo wakho ume ekukhanyeni. Yisebenzise futhi unike amandla ukuboniswa kwezimpawu zakho ezisesitolo nezangaphandle.
2. Izinzuzo zeDynamic LED Panel
• Ingahle ihlelwe ngekhadi lokulawula le-K-8000C nge-DMX512 propotol.
• Ukukhanya okungafani.
• Kulula ukufaka ebhokisini lakho elikhanyayo noma kumaseli.
• Bandakanya izithameli zakho ngokusebenzisa ama-Brand Experience amnandi futhi ayingqayizivele.
• Ukwakhiwa kwe-modular okulula ukwakhiwa
• Ushintsho olulula lokuphrinta nokulayishwa kwamavidiyo wevidiyo
3. Ngamabhodi ayo e-RGB ehlelwe, i-RGB ingasethwa ngemibala eyahlukene eyizigidi eziyi-16.7 .Lolu hlelo oluyingqayizivele lokuphikisana luhlanganiswa kalula kumiklamo yakho yokukhanyisa ye-RGB ukunikeza ukukhanya okufananayo kunoma imuphi umbala. I-LED ngayinye yi-RGB, lokhu kusho ukuthi bakhiqiza umbala obomvu, oluhlaza okotshani noluhlaza okwesibhakabhaka okuthi uma uhlanganisiwe, ungadala noma yimuphi umbala ku-spectrum,
4. Njengoba kunikezwe lokhu kuguquguquka kokushintshwa kombala nokuhlelwa kohlelo, singakha izinhlelo ze-LED eziyinkimbinkimbi ezibandakanya ukuvulwa / ukuvalwa, ukufiphala nokukhanya kanye noshintsho lombala olungaletha isithombe sendwangu ephrintiwe empilweni.
IDynamic 'lightbox ingabekwa phezulu ngodonga, ime mahhala ngezinyawo, yakhelwe ngaphakathi noma imiswe ezintanjeni. Nayo ingahlelwa ukude, ibhokisi ngalinye lingaxhumeka kunethiwekhi engenantambo yendawo futhi uhlelo olusha lungadluliselwa kuyo uma ukwakhiwa kwendwangu entsha sekukhona.
Langaphambilini Amandla aphezulu we-Edge-lit-LED Strip Light
Olandelayo: I-RGB Dynamic Curtain LED Strip
Imodyuli Led Dynamic
Iphaneli yeDynamic Led
Imodyuli Enamandla Emhlophe
I-RGB Dynamic Curtain LED Strip
Iphaneli ehlelwe ye-LED yebhokisi lokukhanya lendwangu